အရှင်စူဠနာဂမထေရ်၏ ခွေးမအားအန်၍ကျွေးလိုက်သော ကုသိုလ်တော်အကျိုးကျေးဇူး - Barnyar Barnyar
အရှင်စူဠနာဂမထေရ်၏ ခွေးမအားအန်၍ကျွေးလိုက်သော ကုသိုလ်တော်အကျိုးကျေးဇူး
May 25, 2022 thanzin laypyay KNOWLEDGE 0
သေချာဖတ်ကြည့်နော်… ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ခွေးကျွေးတဲ့ အလုပ်ကလေးကိုတော့ ဝတ်တစ်ခုလိုကိုထားပြီး လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေဆို လမ်းပေါ်မှာ ခွေးပိန်ကလေးတွေ တွေ့ရရင်တောင် နီးစပ်ရာမုန့်ဆိုင်ကဝယ်ပြီး ကျွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ ဒီခွေးကျွေးတာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းက မေးခွန်းတစ်ခု မေးလာပါတယ်။
“တနင်္လာနံမို့ ခွေးကျွေးတာလား” တဲ့။ မိမိက “တနင်္လာနံ ဆိုတာ ဘာလဲ” လို့ ပြန်မေးတော့ သူငယ်ချင်းက “ငွေနံလေ” တဲ့။ ဒီတော့မှ မိမိလည်းသဘောပေါက်သွားပြီး “တနင်္လာနံကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ သီဟိုဠ်ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ဖူးထားလို့ပါ” လို့ပြောပြီး အဲဒီသီဟိုဠ်ဝတ္ထုလေးကိုပါ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက …
“သြော်…ဒါကြောင့်ကိုး။” လို့ အတည်လိုလို နောက်သလိုလိုနဲ့ ပြန်ပြောခဲ့တာ အခုအထိ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြဖူးခဲ့တဲ့ သီဟိုဠ်ဝတ္ထုလေးကို အခုချစ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေကိုလည်း ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ “အရှင်စူဠနာဂ” လို့ အမည်ရတဲ့ မထေရ်တစ်ပါးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ သီဟိုဠ်ကျွန်း အနုရာဓမြို့မှာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညှပ်ရိုးတော်ကို ဌာပနာထားရာလည်းဖြစ်၊ ဒေဝါနံပိယတိဿမင်းကြီးရဲ့ ကောင်းမှုလည်းဖြစ်တဲ့ ထူပါရုံစေတီဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ထူပါရုံစေတီတော်ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ ကျောင်းကြီးကိုလည်း ထူပါရုံကျောင်းတိုက်ကြီးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အရှင်စူဠနာဂဟာ အဲဒီထူပါရုံကျောင်းတိုက်ကြီးမှာ တခြားရဟန်းတော်တွေနှင့်အတူ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးပါ။
တစ်နေ့မှာ အရှင်စူဠနာဂဆွမ်းစားပြီးလို့ ခံတွင်းဆေးပြီးချိန်မှာ သားတွေပေါက်ထားတဲ့ ခွေးမတစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ခွေးမကိုသေချာကြည့်လိုက်တော့ ပိန်ပိန်ချည့်ချည့်နဲ့ အတော်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့ပုံပါ။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေပုံရတဲ့ ခွေးမကိုမြင်လိုက်တော့ အရှင်စူဠနာဂက တော်တော်လေး သနားသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆွမ်းစားပြီး သပိတ်ဆေးပြီးပြီဆိုတော့ ကျွေးစရာဆွမ်းကျန်လည်း မရှိတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဘာလုပ်လိုက်သလဲဆိုတော့ “ငါသည် စားအပ်ပြီးသော အစာမှန်သော်လည်း ထိုခွေးမအား အန်၍ လှူအံ့သောငှာအပ်၏” လို့ နှလုံးပိုက်ပြီး မိမိရဲ့ ခံတွင်းထဲကို လက်ထိုးအန်ပြီး ခွေးမကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်။
အရှင်စူဠနာဂဟာ ခွေးမကို အန်ကျွေးရုံတင်မကပါဘူး၊ အိုးခြမ်းကွဲတစ်ခုထဲမှာ ရေထည့်ပြီး ရေလဲတိုက်လိုက်ပါသေးတယ်။ အစာထိုက်သင့်သလောက် ဝသွားတဲ့ခွေးမကို ကြည့်ပြီး အရှင်စူဠနာဂလည်း တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးတဲ့ ပီတိတွေဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆုတစ်ခုကို ကောက်ခါငင်ခါ တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆုတောင်းက “ငါသည် ဤခွေးမအား မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို မငဲ့ကွက်ဘဲ အန်၍ကျွေးလိုက်ရသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့် နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို၏။
နိဗ္ဗာန်မရသေး၍ သံသရာကျင်လည်ရသည်ရှိသော် ပစ္စည်းလာဘ်လာဘ ပေါများရပါလို၏” တဲ့။ စာမှာတော့ အရှင်စူဠနာဂရဲ့ ဒါနစေတနာဟာ ပထမဇောအဆင့်မှာတင် အရှိန်အဟုန်အစွမ်း တော်တော်ကြီးမားနေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရှင်စူဠနာဂဆုတောင်းတဲ့နေ့ ညချမ်းမှာပဲ ဒကာ ဒကာမများစွာဟာ ထောပတ်တွေ တင်လဲခဲတွေ သကာတွေ ပျားရည်တွေ ယူလာပြီး “အရှင်စူဠနာဂ ဘယ်ကျောင်းမှာ နေပါသလဲ” လို့ မေးပြီး ရောက်လာကြပါတယ်။ အရှင်စူဠနာဂလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အံ့အားသင့်နေပါတယ်။ အရှင်စူဠနာဂဟာ ရောက်လာတဲ့ ဘုဉ်းပေးစရာတွေကို သီတင်းသုံးဖော်ရဟန်းတော်တွေကိုပါ ခွဲဝေလှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်။
နောက်မကြာခင်မှာ ဒကာ ဒကာမတွေ ထပ်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ သူတို့ သီဟိုဠ်ခေတ်မှာ အသုံးများတဲ့ ဇာတိပ္ဖိုလ်ပွင့် အစရှိတဲ့ဆေးတွေကို ယူလာပြီး ကပ်လှူပြန်ပါတယ်။ အရှင်စူဠနာဂလည်း ရှေးနည်းအတိုင်း သီတင်းသုံးဖော်တွေကိုပါ ခွဲဝေလှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်။ နံနက်လင်းလို့ ဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမှာတော့ ဒကာ ဒကာမတွေဟာ ရေတွက်လို့မရနိုင်လောက်အောင် ဆွမ်းဟင်းများစွာကို လောင်းလှူတော့တာပါပဲတဲ့။
ထူပါရုံကျောင်းတိုက်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ရဟန်းတော်အားလုံး သုံးဆောင်နိုင်လောက်အောင်အထိ များပြားလွန်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရှင်စူဠနာဂက ကျောက်စည်ကို တီးခတ်ပြီး ထူပါရုံကျောင်းတိုက်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ရဟန်းတော်တွေကို ပြန်ပြီးလောင်းလှူလိုက်ပါတယ်။
နောက်ရက်တွေမှာလည်း အရှင်စူဠနာဂဟာ ရသမျှဆွမ်းဟင်းတွေကို ကျောက်စည်တီးခတ်ပြီးနေ့စဉ်ပြန်လှူခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ အရှင်စူဠနာဂဟာ မိမိပြုခဲ့တဲ့ ဒါနစေတနာကို ပြန်ဆင်ခြင်ရင်း ပီတိတွေဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပီတိကို အခြခံပြီး ဝိပဿနာဘက်ကူး ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာကို ကြိုးကြိုးစားစား အားထုတ်လိုက်တာ ရဟန္တာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
တက်ကြွထက်သန်တဲ့ “ဒါနစေတနာ”ဟာ ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတင်မကဘဲ “အရဟတ္တဖိုလ်”အထိ အကျိုးပေးသွားတာပါပဲ။ အရှင်စူဠနာဂ ရဟန္တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း တစ်ခုသောကာလကြာကြာ ရက်တစ်ရက်မှာ ထူပါရုံကျောင်းတိုက်မှာရှိတဲ့ ရဟန်းတော်ငါးရာကြွလာပြီး မဇ္ဈိမဒေသ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မဟာဗောဓိပင်ကို လိုက်ပို့ပေးဖို့ တောင်းပန်ကြပါတယ်။ အရှင်စူဠနာဂကလည်း လိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ ပြန်ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။
အရှင်စူဠနာဂကို လိုက်ပို့ပေးဖို့ တောင်းပန်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းကတော့ လမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှာ ဆွမ်းကွမ်းအခက်အခဲ မရှိအောင်လို့ပါ။ အရှင်စူဠနာဂလည်း ဂတိခံထားတဲ့အတိုင်း ရဟန်းတော်ငါးရာကို မဟာဗောဓိပင်ကို လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ လမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက ကူညီစောင့်ရှောက်သလိုရောက်ရာဒေသက ဒကာ ဒကာမတွေကလည်း ဆွမ်းအချိုပွဲတွေ အလျှံအပယ် လောင်းလှူကြပါတယ်။
မဟာဗောဓိပင်ကိုဖူးပြီး အပြန်ခရီးမှာတော့ အရှင်စူဠနာဂဟာ လေဝမ်းရောဂါကို အပြင်းအထန်ခံစားရပါတော့တယ်။ ဒီတော့ အတူပါလာသူ
ရဟန်းတော်တွေလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ သူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြခြင်းရဲ့ အကြောင်းကတော့ အကယ်၍ အရှင်စူဠနာဂ လမ်းခရီးမှာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့ရင် သူတို့အတွက် ဆွမ်းဘောဇဉ်အခက်အခဲ တွေ့ကြမှာစိုးလို့ပါ။
ဒါကိုသိတဲ့ အရှင်စူဠနာဂက အဖော်ရဟန်းငါးရာကို ဘယ်လိုမိန့်သလဲဆိုတော့ “အရှင်ဘုရားတို့၊ အထွေအထူး မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့။ တပည့်တော် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့ရင် ကြွင်းကျန်တဲ့ တပည့်တော်ရဲ့ဓါတ်တော်ကို ရှေ့ဆုံးကကြွတဲ့ မထေရ်ရဲ့ရေစစ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ သပိတ်မှာဖြစ်ဖြစ် ဖွဲ့ချည်ပြီး မြို့ရွာထဲဝင်ပါဘုရား။ ဒါဆို အရှင်ဘုရားတို့အတွက် လမ်းခရီးမှာ ပစ္စည်းလေးပါးအတွက် မပင်မပန်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရား။” လို့ အကြံပေးတော်မူပါတယ်။
အရှင်စူဠနာဂမထေရ်လည်း အဲဒီလိုအကြံပေးပြီး မကြာခင်မှာပဲ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ သတင်းသုံးဖော်ရဟန်းတော်တွေက အရှင်စူဠနာဂရဲ့ အလောင်းတော်ကို ကောင်းကောင်းသဂြိုလ်ပြီး အရှင်စူဠနာဂမှာခဲ့တဲ့အတိုင်း ဓါတ်တော်တွေကိုယူပြီးကြွတော်မူကြပါတယ်။ ကြွတော်မူတဲ့ လမ်းခရီးတစ်လျှောက် ပစ္စည်းလေးပါးမပင်မပန်းနဲ့ မိမိတို့သီတင်းသုံးရာ သီဟိုဠ်ကျွန်း ထူပါရုံကျောင်းတိုက်ကို ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စေတနာကြီးမားလှတဲ့ သာမန်ဒါနလေးဟာ ကာယကံရှင်မရှိတော့တာတောင် ကျန်ခဲ့သူတွေအတွက် အကျိုးပြုသွားတဲ့ သီဟိုဠ်ဓမ္မဝတ္ထုလေးပါ။ စေတနာရဲ့ သဘောသရုပ်ကို ဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုလေးအဖြစ်လည်း ပူးတွဲသဘောပေါက်လိုက်ရပါတယ်။ အရှင်စူဠနာဂရဲ့ဝတ္ထုလေးကို သတိရနေသမျှတော့ခွေးတွေကို ကျွေးဖြစ်နေအုံးမှာပါ။ ခွေးတွေကို ကျွေးဖြစ်နေသမျှတော့ အရှင်စူဠနာဂရဲ့ ဝတ္ထုလေးကို သတိရနေဖြစ်အုံးမှာပါ။credit.
အရှငျစူဠနာဂမထရျေ၏ ခှေးမအားအနျ၍ကြှေးလိုကျသော ကုသိုလျတျောအကြိုးကြေးဇူး
သခြောဖတျကွညျ့နျော… ဘယျနရောရောကျရောကျ ခှေးကြှေးတဲ့ အလုပျကလေးကိုတော့ ဝတျတဈခုလိုကိုထားပွီး လုပျဖွဈပါတယျ။ တဈခါတလဆေို လမျးပျေါမှာ ခှေးပိနျကလေးတှေ တှရေ့ရငျတောငျ နီးစပျရာမုနျ့ဆိုငျကဝယျပွီး ကြှေးခဲ့ဖူးပါတယျ။ တဈနတေ့ော့ ဒီခှေးကြှေးတာနှငျ့ ပတျသကျပွီး သူငယျခငျြးက မေးခှနျးတဈခု မေးလာပါတယျ။
“တနင်ျလာနံမို့ ခှေးကြှေးတာလား” တဲ့။ မိမိက “တနင်ျလာနံ ဆိုတာ ဘာလဲ” လို့ ပွနျမေးတော့ သူငယျခငျြးက “ငှနေံလေ” တဲ့။ ဒီတော့မှ မိမိလညျးသဘောပေါကျသှားပွီး “တနင်ျလာနံကွောငျ့တော့ မဟုတျဘူး။ သီဟိုဠျဝတ်ထုလေးတဈပုဒျကို ဖတျဖူးထားလို့ပါ” လို့ပွောပွီး အဲဒီသီဟိုဠျဝတ်ထုလေးကိုပါ သူငယျခငျြးကို ပွောပွဖွဈလိုကျပါတယျ။ သူငယျခငျြးက …
“သွျော…ဒါကွောငျ့ကိုး။” လို့ အတညျလိုလို နောကျသလိုလိုနဲ့ ပွနျပွောခဲ့တာ အခုအထိ မှတျမိနပေါသေးတယျ။ သူငယျခငျြးကို ပွောပွဖူးခဲ့တဲ့ သီဟိုဠျဝတ်ထုလေးကို အခုခဈြတဲ့ စာဖတျသူတှကေိုလညျး ပွနျပွောပွခငျြပါတယျ။
တဈခါတုနျးက သီဟိုဠျကြှနျးမှာ “အရှငျစူဠနာဂ” လို့ အမညျရတဲ့ မထရျေတဈပါးရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ သီဟိုဠျကြှနျး အနုရာဓမွို့မှာ မွတျစှာဘုရားရဲ့ညှပျရိုးတျောကို ဌာပနာထားရာလညျးဖွဈ၊ ဒဝေါနံပိယတိဿမငျးကွီးရဲ့ ကောငျးမှုလညျးဖွဈတဲ့ ထူပါရုံစတေီဆိုတာ ရှိပါတယျ။
တဈနမှေ့ာ အရှငျစူဠနာဂဆှမျးစားပွီးလို့ ခံတှငျးဆေးပွီးခြိနျမှာ သားတှပေေါကျထားတဲ့ ခှေးမတဈကောငျကို တှလေို့ကျရပါတယျ။ ခှေးမကိုသခြောကွညျ့လိုကျတော့ ပိနျပိနျခညျြ့ခညျြ့နဲ့ အတျောဆာလောငျမှတျသိပျနတေဲ့ပုံပါ။ ဆာလောငျမှတျသိပျနပေုံရတဲ့ ခှေးမကိုမွငျလိုကျတော့ အရှငျစူဠနာဂက တျောတျောလေး သနားသှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆှမျးစားပွီး သပိတျဆေးပွီးပွီဆိုတော့ ကြှေးစရာဆှမျးကနျြလညျး မရှိတော့ပါဘူး။
အရှငျစူဠနာဂဟာ ခှေးမကို အနျကြှေးရုံတငျမကပါဘူး၊ အိုးခွမျးကှဲတဈခုထဲမှာ ရထေညျ့ပွီး ရလေဲတိုကျလိုကျပါသေးတယျ။ အစာထိုကျသငျ့သလောကျ ဝသှားတဲ့ခှေးမကို ကွညျ့ပွီး အရှငျစူဠနာဂလညျး တဈခါမှ မဖွဈဖူးတဲ့ ပီတိတှဖွေဈလာပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဆုတဈခုကို ကောကျခါငငျခါ တောငျးလိုကျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ဆုတောငျးက “ငါသညျ ဤခှေးမအား မိမိရဲ့ခန်ဓာကိုယျကို မငဲ့ကှကျဘဲ အနျ၍ကြှေးလိုကျရသော ကုသိုလျကောငျးမှုကွောငျ့ နိဗ်ဗာနျရောကျရပါလို၏။
နိဗ်ဗာနျမရသေး၍ သံသရာကငျြလညျရသညျရှိသျော ပစ်စညျးလာဘျလာဘ ပေါမြားရပါလို၏” တဲ့။ စာမှာတော့ အရှငျစူဠနာဂရဲ့ ဒါနစတေနာဟာ ပထမဇောအဆငျ့မှာတငျ အရှိနျအဟုနျအစှမျး တျောတျောကွီးမားနခေဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
နောကျမကွာခငျမှာ ဒကာ ဒကာမတှေ ထပျရောကျလာပွနျပါတယျ။ သူတို့ သီဟိုဠျခတျေမှာ အသုံးမြားတဲ့ ဇာတိပ်ဖိုလျပှငျ့ အစရှိတဲ့ဆေးတှကေို ယူလာပွီး ကပျလှူပွနျပါတယျ။ အရှငျစူဠနာဂလညျး ရှေးနညျးအတိုငျး သီတငျးသုံးဖျောတှကေိုပါ ခှဲဝလှေူဒါနျးလိုကျပါတယျ။ နံနကျလငျးလို့ ဆှမျးခံကွှတဲ့အခါမှာတော့ ဒကာ ဒကာမတှဟော ရတှေကျလို့မရနိုငျလောကျအောငျ ဆှမျးဟငျးမြားစှာကို လောငျးလှူတော့တာပါပဲတဲ့။
ထူပါရုံကြောငျးတိုကျမှာ သီတငျးသုံးနတေဲ့ ရဟနျးတျောအားလုံး သုံးဆောငျနိုငျလောကျအောငျအထိ မြားပွားလှနျးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရှငျစူဠနာဂက ကြောကျစညျကို တီးခတျပွီး ထူပါရုံကြောငျးတိုကျမှာ သီတငျးသုံးနတေဲ့ ရဟနျးတျောတှကေို ပွနျပွီးလောငျးလှူလိုကျပါတယျ။
နောကျရကျတှမှောလညျး အရှငျစူဠနာဂဟာ ရသမြှဆှမျးဟငျးတှကေို ကြောကျစညျတီးခတျပွီးနစေ့ဉျပွနျလှူခဲ့ပါတယျ။ တဈနမှေ့ာတော့ အရှငျစူဠနာဂဟာ မိမိပွုခဲ့တဲ့ ဒါနစတေနာကို ပွနျဆငျခွငျရငျး ပီတိတှဖွေဈလာပါတယျ။ အဲဒီဖွဈပျေါလာတဲ့ ပီတိကို အခွခံပွီး ဝိပဿနာဘကျကူး ကမ်မဋ်ဌာနျးဘာဝနာကို ကွိုးကွိုးစားစား အားထုတျလိုကျတာ ရဟန်တာဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
တကျကွှထကျသနျတဲ့ “ဒါနစတေနာ”ဟာ ပစ်စုပ်ပနျအကြိုးတငျမကဘဲ “အရဟတ်တဖိုလျ”အထိ အကြိုးပေးသှားတာပါပဲ။ အရှငျစူဠနာဂ ရဟန်တာဖွဈပွီးနောကျပိုငျး တဈခုသောကာလကွာကွာ ရကျတဈရကျမှာ ထူပါရုံကြောငျးတိုကျမှာရှိတဲ့ ရဟနျးတျောငါးရာကွှလာပွီး မဇ်ဈိမဒသေ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာရှိတဲ့ မဟာဗောဓိပငျကို လိုကျပို့ပေးဖို့ တောငျးပနျကွပါတယျ။ အရှငျစူဠနာဂကလညျး လိုကျပို့ပေးပါမယျလို့ ပွနျဝနျခံလိုကျပါတယျ။
အရှငျစူဠနာဂကို လိုကျပို့ပေးဖို့ တောငျးပနျရခွငျးရဲ့ အဓိကအကွောငျးကတော့ လမျးခရီးတဈလြှောကျမှာ ဆှမျးကှမျးအခကျအခဲ မရှိအောငျလို့ပါ။ အရှငျစူဠနာဂလညျး ဂတိခံထားတဲ့အတိုငျး ရဟနျးတျောငါးရာကို မဟာဗောဓိပငျကို လိုကျပို့ပေးပါတယျ။ လမျးခရီးတဈလြှောကျမှာ နတျကောငျးနတျမွတျတှကေ ကူညီစောငျ့ရှောကျသလိုရောကျရာဒသေက ဒကာ ဒကာမတှကေလညျး ဆှမျးအခြိုပှဲတှေ အလြှံအပယျ လောငျးလှူကွပါတယျ။
မဟာဗောဓိပငျကိုဖူးပွီး အပွနျခရီးမှာတော့ အရှငျစူဠနာဂဟာ လဝေမျးရောဂါကို အပွငျးအထနျခံစားရပါတော့တယျ။ ဒီတော့ အတူပါလာသူရဟနျးတျောတှလေညျး စိတျမကောငျးဖွဈကွရပါတယျ။ သူတို့စိတျမကောငျးဖွဈကွခွငျးရဲ့ အကွောငျးကတော့ အကယျ၍ အရှငျစူဠနာဂ လမျးခရီးမှာ ပရိနိဗ်ဗာနျပွုခဲ့ရငျ သူတို့အတှကျ ဆှမျးဘောဇဉျအခကျအခဲ တှကွေ့မှာစိုးလို့ပါ။
ဒါကိုသိတဲ့ အရှငျစူဠနာဂက အဖျောရဟနျးငါးရာကို ဘယျလိုမိနျ့သလဲဆိုတော့ “အရှငျဘုရားတို့၊ အထှအေထူး မစိုးရိမျကွပါနဲ့။ တပညျ့တျော ပရိနိဗ်ဗာနျပွုခဲ့ရငျ ကွှငျးကနျြတဲ့ တပညျ့တျောရဲ့ဓါတျတျောကို ရှဆေုံ့းကကွှတဲ့ မထရျေရဲ့ရစေဈမှာဖွဈဖွဈ၊ သပိတျမှာဖွဈဖွဈ ဖှဲ့ခညျြပွီး မွို့ရှာထဲဝငျပါဘုရား။ ဒါဆို အရှငျဘုရားတို့အတှကျ လမျးခရီးမှာ ပစ်စညျးလေးပါးအတှကျ မပငျမပနျးဖွဈရပါလိမျ့မယျဘုရား။” လို့ အကွံပေးတျောမူပါတယျ။
စတေနာကွီးမားလှတဲ့ သာမနျဒါနလေးဟာ ကာယကံရှငျမရှိတော့တာတောငျ ကနျြခဲ့သူတှအေတှကျ အကြိုးပွုသှားတဲ့ သီဟိုဠျဓမ်မဝတ်ထုလေးပါ။ စတေနာရဲ့ သဘောသရုပျကို ဖှငျ့ပွခဲ့တဲ့ ဝတ်ထုလေးအဖွဈလညျး ပူးတှဲသဘောပေါကျလိုကျရပါတယျ။ အရှငျစူဠနာဂရဲ့ဝတ်ထုလေးကို သတိရနသေမြှတော့ခှေးတှကေို ကြှေးဖွဈနအေုံးမှာပါ။ ခှေးတှကေို ကြှေးဖွဈနသေမြှတော့ အရှငျစူဠနာဂရဲ့ ဝတ်ထုလေးကို သတိရနဖွေဈအုံးမှာပါ။credit.
Total Hits : 318872